Min Khant x Vestige Short Sleeve Vestige Letters and Tiger Printed T-shirt – Red | Buy online | SHOP.COM.MM
Min Khant x Vestige Short Sleeve Vestige Letters and Tiger Printed T-shirt – Red
Min Khant x Vestige ရဲ့တီရှပ်လေးက အသားလေးအရမ်းကောင်းပြီး ၀တ်လို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
ရိုးရိုးတီရှပ်ပေမယ့် ဒီဇိုင်းအရမ်းဆန်းပါတယ်။ ၀တ်ရတာသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပါတယ်။ Read more Hide
May Htet Htet Khaing
Min Khant x Vestige တီရှပ်ကအရမ်းမိုက်ပါတယ်။ အသားကောင်းပြီး ဈေးလည်းအရမ်းတန်ပါတယ်။ Read more Hide
ကြက်သွေးရောင်အရမ်းကြိုက်တယ်။ ၀တ်လိုက်တိုင်းအသားထင်းသွားလို့ပါ။ Vestige ကဆိုတော့ အရည်အသွေးပိုင်းလည်းစိတ်ချရတယ်။ Read more Hide
As always, Vestige came through withat-shirt that looks good, doesn't fade after washing's and just keeps looking good!! Read more Hide
It isashort-sleeved t-shirt with the vestige words and tiger printed design on the front. You can cut up this t-shirt and restyle it according to your own sense of style.
Vestige words and tiger printed design
Specifications of Short Sleeve Vestige Letters and Tiger Printed T-shirt – Red